Xidig: “Aniga aya ah madaxweynaha sharciga ah” |
Dhanka musharrixiintii mucaradka waxay sheegeen in ay qabteen doorasho “uu ku guuleystay Cabdirashiid Maxamed Xidig” oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Wuxuu BBC Somali u sheegay in uu isaga yahay “madaxweynaha sida sharciga ah lagu doortay ee maamulka Jubbaland”.
“Aniga ayaa madaxweyne ka ah Jubbaland waxaana la ii doortay si sharci ah” ayuu yiri Cabdirashiid Xidig oo la hadlayay BBC.
Musharrixiintii mucaaradka ee uu Xidig ka mid yahay waxay ka soo horjeedeen hannaankii doorashada ee uu ku guuleystay Axmed Madoobe.
Cabdirashiid Xidig ayaa maamulka ku eedeeyay in ay “Odeyaal dhaqan ay iyaga soo qorteen iyo baarlaman ay soo qorteen in uu ahaa midka shaqeynayay”.
“guddi doorasho oo qof uu sameystay, si cad baa loo wada arkay boob iyo fowdho ciddii ka shaqeyneysay. Umadda oo dhan haddey Soomaali tahay iyo haddii aysan ahayn, way arkaan,” ayuu yiri.
Cabdirashiid ayaa ku doodaya in odayaasha ee dhankooda soo xuleen ay la kulmeen beesha caalamka “lana ogyahay in baarlamaanka ay odayaashaas soo xuleen”.
Waxaa uu sidoo kale ka dhawaajiyay in hadda ay ka shaqeyn doonaan “u adeegidda shacabka maamulkaas iyo dib usoo celinta caasimaddii gobolka ee Bu’aale.”
Axmed Madoobe iyo madaxda dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxaa ka dhexeeyo khilaaf ay beesha caalamka isku deyeen in ay xalliyan
Balse Xidig ayaa sheegay in dowladda uu si dhow ula shaqeyn doono. Wuxuu sheegay in uu “si dhaw ula shaqeynayo madaxda dowladda federaalka Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Ra’iisul wasaare Kheyre gacmaha”.
“Waa in gacmaha la is qabsado, Soomaalinimada iyo dowladnimada laga shaqeeyo,” ayuu yiri Xidig.
Cabdirashiid wuxuu sheegay “in aysan jirin cid kale oo uu u aqoonsan yahay in manta la doortay oo ku sugan magaalada Kismaayo”, wuxuu intaa ku daray in uu diyaar u yahay inuu la kulmo cid kasta oo reer Jubbaland ah.
Waxaa muuqata in mucaaradka ay hadda kala jabeen iyadoo Sheekh Maxamed Shakuul oo kamid ah musharraxiinta mucaaradka uu ka soo horjeestay doorashada maanta dib loogu doortay Axmed Madoobe iyo midda kale ay mucaaradka ku doorteen Cabdirashiid Maxamed Xidig.
“Maanta sey wax u dhaceen aad ayaa uga xunahay, in maanta Kismaayo ay kasoo baxeen labo madaxweyne runtii arrin aad u fool xun weeye….anagu kuma faraxsanin arrinkaa isaga ah tan lagu doortay madaxweyne Axmed in hannaanka ay ku socotay uusan dastuurka waafaqsaneyn…tan kale waa ay kasii daran tahay” ayuu yiri Sheekh Shakuul.
Waxaa uu ku baaqay in wadahadallo lagu dhameeyo khilaafka ka dhashay doorashada Jubbaland.
Hadalka Maxamed Shakuul ayaa imaanaya xilli maanta magaalada Kismaayo lagu doortay Axmed Maxamed Islaam halka musharraxiinta mucaaradka ay sheegeen inay iyagana ay madaxweyne u doorteen Cabdirashiid Xidig.